I-Semalt Ichitha Izintambo Ze-SEO Zezintambo
i-SEO yingxenye ebalulekile yokuthuthukisa iwebhusayithi. Ngabantu abaningi nokwenzayoukusesha kuma-smartphones abo, iwebhu yeselula iye yaqhuma. I-SEO yefoni yeselula iphinde ibe isihloko esishisayo, kodwa ngokudabukisayo iningi leUkwaziswa ongayithola mayelana ne-SEO yeselula kungamanga.
uRoss Barber, uchwepheshe we i-Semalt Amasevisi weDivaysi, ichitha ama-8 ayisithupha e-SEO.
Inkolelo-ze 1: Okufunwa ngabantu ku-PC naselula kufana
Iqiniso: Abantu bayahamba, ngakho abanakho ukunethezeka kokufunda imibiko ejulile,okuthunyelwe kwebhulogi eside kanye nokuthola ucwaningo kumadivayisi wabo weselula. Ngokujwayelekile, bafuna izimpendulo ezisheshayo - kanger pro tank 2 coil rebuilders. Lokhu kuhlukanisa ngokuzenzakalelayolokho abantu abakufunayo kunoma iyiphi idivayisi. Indlela engcono kakhulu yokuhlola ukuthi yini abantu abayifunayo kumadivayisi wabo weselula ukusebenzisa i-GoogleI-AdWords. Uzokwazi ukubheka ngokuqondakalayo isilinganiso sefoni samagama angukhiye afakwe ngabantu.
Inganekwane 2: Ukusesha kwefoni kanye nokuseshwa kwe-PC kubonisa imiphumela efanayo
Iqiniso: Izinjini zokusesha ziyasebenza kanzima ukwenza kube lula ngabantu ukuthola ukuthi yinibadinga uma beyidinga. Lokhu kusho ukuthi amawebhusayithi angabonisi abasebenzisa iselula awasezingeni eliphezulu emiphumeleni. Iwebhusayithi yakho ingahle ifakwe kahlei-PC, kodwa ingahle ifake kahle ukuseshwa kweselula. Ngakho, imiphumela yokuseshwa kwe-PC nokuseshwa kweselula kuhluke ngokuphelele. Ukutadisha kwe-Googleiqinisekisa leli phuzu. Esikhathini sokucwaninga, i-giant search engine inithole ukuthi kwakukhona umehluko we-86% endleleni imiphumela yaboniswa ngayongokusho kwe-interfaces ehlukene.
Inkolelo-ze 3: Abantu maduzane bayeka ukusesha amafoni abongoba bazoqala ukucinga amadivayisi abo agqokekayo
Iqiniso: Nakuba amadivaysi agqoke athathe imakethe ngesivunguvungu, awanjalo njengeyinkimbinkimbiemizamweni yabo yokwenza usesho olufanele. Isikhathi sobuchwepheshe bokusesha obugqokekayo siyisiqalo nje..I-Siri ne-Google Goggles inayowazama ukuthola impindiselo, kodwa ngisho neSiri kuphela ithatha isigxobo esingu-3% emakethe, okubonisa ukuthi abantu abazange bamamukele ngokupheleleumqondo wokutshala idivayisi yabo yeselula usesho ukuseshelwa kumadivaysi agqokekayo.
Inganekwane 4: I-SEO yeselula ayiyona into!
Iqiniso: Abantu abaningi bangathanda ukucabanga ukuthi i-SEO yeselula iwukuphela kwesikhathi esiyiloziphonswe ngokuzungezile. Kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi abaziqondi kahle, futhi kukhona ochwepheshe abambalwa abazungezile. Kukhona abantu abaningicabanga okungalungile nge-SEO yeselula, kodwa lokho akusho ukuthi umqondo ongewona okhona okufanele udakiwe ngokuphelele.
Inkolelo-ze 5: I-SEO i-SEO, futhi yonke into efanayo
Iqiniso: Ayikho, akukho, nope. I-SEO ayiyona into efanayo. I-SEO yendawo, i-SEO yeselula, ne-SEOAmawebusayithi ahlelwe ukusetshenziswa kwedeskithophu kanye ne-laptop akuzona zonke ezifanayo. Ngokushesha uma uqaphela lokhu bese uyilungisela indawo yakho, iIzinga eliphezulu nokuguqulwa ozothola.
Inganekwane 6: Vele ulungiselele i-SEO kumafoni weselula kanye ne-voila - SEO yeselula!
Iqiniso: Sifisa ukuthi lokhu kwakungelula kodwa akusikho. Awukwazi ukuhlela i-SEO yamawebhusayithi kanyesishintshe ukuze uhambisane nomakhalekhukhwini. Indlela yokwenza i-SEO yeselula ihluke ngokuphelele ekuthuthukiseni amawebhusayithi. Ngoba kukhona okuningiukuhlukahluka kwamadivaysi eselula ngaphandle, i-SEO yeselula kufanele ibe yiyona ecacile futhi eqondile kunewebsite SEO. Ukufunda nge-SEO yeselula kuzokwenzazidinga isikhathi nokubekezela, kodwa uma kwenziwa kahle, kuzokulethela imiphumela emihle.
Inganekwane 7: Yakha iwebhusayithi eqinisekisiwe bese uyihlanganisa ngomakhalekhukhwini
Iqiniso: Ukuthuthukisa iwebhusayithi yakho ukuba isetshenziswe kuzo zonke izixhumanisi kungase kubonakale sengathi kuyintandokaziumqondo. Kodwa-ke, udinga ukucabangela ukuthi abantu bangase bangakwazi ukuthola okudingayo kusuka kusayithi lakho. Empeleni, kufika ku-60%abantu abatholi ngaso sonke isikhathi lokho okudingayo ekusesheni kweselula. Lokhu kwenzeka ngoba ukusebenza kweselula kuqondile futhi kuyadingeka ukuba kubeithuthukiswe njengenhlangano ehlukile futhi ayizange ifakwe kwisiteleka se-SEO sewebhu. Ngokwesibonelo, i-BMW ne-Amazon sezichithe izinkulungwane zamaRandibasebenzela kanzima ukuqinisekisa ukuthi amawebhusayithi abo anobungane be-mobile futhi ukuthi i-SEO yeselula iye yasetshenziswa kahle.
Inganekwane 8: Kunzima ukuthola izixhumanisi uma usebenzisa i-SEO yeselula
Iqiniso: Akukho lutho olungaqhubeka luvela eqinisweni kunalokho! Eqinisweni, isayithi elihloniphekileabanikazi bafuna ukuthola izixhumanisi ezivela kumawebhusayithi anemikhuba emihle ye-SEO. Ngakho uthi hi ukuze uthole izixhumanisi kusuka ku-Google, Mashable, nakwezinyeizingosi ezigunyazayo.
Sithemba ukuthi sikusize ukuba uthuthukise ezinye ze-SEO zezintambo ezihamba phambili nokukhanyaendabeni yeqiniso.